Osteo Joint Complex - Megafit Nutrition
Home Shop Osteo Joint Complex
အမျိုးအမည်နံပါတ : 000-12.
အမျိုးအစားများ: Glucosamine/Chondroitin, ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးမျာ.
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူး : အဆစ်အမြစ် ပံ့ပိုးမှု အရိုးပံ့ပိုးမှု
ကိုက်ခဲမှု၊ နာကျင်မှုနှင့် အဆစ်အမြစ်များ တောင့်တင်းမှုတို့ကို လျော့ပါးစေရန်အထောက်အကူပြုသည့် အစွမ်းထက်
Glucosamine ၊ Chrondroitin နှင့် MSM တို့ ပေါင်းစပ်မှု
အရေအတွက် : 200
အကြိမ်ရေ : တစ်နေ့ 1 ကြိမ်
တိုက်ကျွေးရမည့် ပမာဏ : ဆေး5တောင့်
Osteo Joint Complex isaFull Spectrum Joint formula that uses Glucosamine & Chondroitin. In the body they are building blocks for cartilage and appear to stimulate the body to make more cartilage. Combined with MSM that may help with easing the pain of Arthritis, this formula is considered one of the cutting-edge products in the Joint category.